SBS Express service မှ လူကြီးမင်းတို့ ရုံးကိစ္စများအတွက် အရေးကြီးပို့ဆောင်ရန်ရှိသော စာ/ပါဆယ်များကို ရန်ကုန်မြိုံတွင်းသာမက မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ မြို့ပေါင်း ၁၀၀ကျော်သို့အိမ်တိုင်ရာရောက်အမြန်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ မြို့အကွာအ၀ေးအလိုက် ပို့ဆောင်ရန် ကြာချိန်သည် ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သော နေ့ချင်းပို့၀န်ဆောင်မှု့ ။ နေ့စဥ်လာရောက်ယူဆောင်ပြီး ပို့ဆောင်သော၀န်ဆောင်မှု့ တို့ကို လည်းအချိန်တိကျစွာ၀န်ဆောင်မှု့ပေးပါသည်။ သင်ပို့ဆောင်သော စာနှင့် ပစ္စည်းများ၏ပို့ဆောင်မှု့အခြေအနေကို ဖုန်း (သို့)​ computer ဖြင့် ၂၄ နာရီပတ်လုံး စောင့်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
E-commerce site များ၊ Online ရောင်းချသောသူများအတွက် အရေးကြီးဆုံးသော Last Mile Delivery service အား လူကြီးမင်းတို့အတွက်တာ၀န်ယူပါရေစေ။ လူကြီးမင်းတို့၏online shop တွင်ရောင်းချသော ပစ္စည်းများကို ၀ယ်သူသော မြန်မာပြည်အနှံ့ ရှိသင်၏ဖောက်သည်များထံသို့ပို့ဆောင်ရန်အတွက်မြို့ပေါင်း ၁၀၀ကျော်သို့ အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ မြို့အကွာအဝေးအလိုက် ပို့ဆောင်ရန် ကြာချိန်သည် ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ သင်ပို့ဆောင်သော ပစ္စည်းများကို ဖုန်း (သို့)​ computer ဖြင့် ၂၄ နာရီပတ်လုံး စောင့်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြို့အကွာအဝေးအလိုက် ပို့ဆောင်ရန် ကြာချိန်သည် ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ သင်ပို့ဆောင်သော ပစ္စည်းများကို ဖုန်း (သို့)​ computer ဖြင့် ၂၄ နာရီပတ်လုံး စောင့်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပါ၀င်သော ၀န်ဆောင်မှုများမှာ
၁. ပစ္စည်း လာရောက်ယူဆောင်ပေးခြင်း။
၂. ငွေကောက်ခံသော ၀န်ဆောင်မှု့ပေးခြင်း။
Online e-commerce ရောင်းချသူများ တစ်နေရာထဲတွင်အဆင်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်းမှ စတင်၍ ပို့ဆောင်ပြီးသည်အထိ တာ၀န်ယူလုပ်ဆောင်ပေးသော ၀န်ဆောင်မှု့ဖြစ်ပါသည်။ ပါ၀င်သော၀န်ဆောင်မှု့များမှာ
၂။ Order လက်ခံပေးခြေင်း
၆။ ပစ္ဏည်း အ၀င်အထွက် ပြုလုပ်ပေးခြင်း
လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းမြန်ဆက်တိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ပို့ဆောင်ရေး၀န်ဆောင်မှု့ နှင့်ပတ်သက်၍ တစိတ်တဒေသဖြစ်စေ အလုံးစုံဖြစ်စေ SBS Logititcsမှ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းသို့ သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်း နှင့် ပို့ဆောင်ရမည့်နေရာသို့သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။လူကြီးမင်းတို့အတွက်လိုအပ်သောပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်း။ နည်းလမ်းများ ဖေါ်ဆောင်ပေးခြင်းတို့ကိုကျွန်ပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံများနှင့်ပေါင်းစပ်၍ အကောင်းဆုံး၀န်ဆောင်မှု့ ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် သိုလောင်ခြင်း ၊ ယူဆောင်ပေးခြင်း ၊ ထုတ်ပိုးပေးခြင်း စသည့်၀န်ဆောင်မှု့များကိုလည်း တစ်နေရာတည်းတွင် အဆင်ပြေစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ ကို မြန်မာပြည်အနှံ့ရှိ လူကြီးမင်းတို့၏ မိတ်ဖတ်များရှိရာ နေရာ၊ ဆိုင်ရှေ့ သို့ အချိန်မှီရောက်ရှိရန် အတွက် SBS last Mile service မှ​ လူကြိးမင်းတို့ကိုယ်စားအိမ်တိုင်ရာရောက် ဖြန့်ချီပေးသော၀န်ဆောင်မှု့ ပေးလျက်ရှီပါသည်။
လူကြီးမင်တို့ ကုန်ပစ္ဏည်းများကို တစိတ်တဒေသဖြစ်စေ ။ အားလုံးကိုဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့များသို့ လုံခြုံစိတ်ချ လျင်မြန်စွာ ပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် SBS Cargo မှ​ Company ပိုင်ကားများဖြင့် သင့်တင်သောနှုန်းထားကာ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ ၏ ပစ္ဏည်းမျာကို ခနတဖြုတ် ထားသိုရန် ဖြစ်စေ ၊ လစဥ် ထားသိုရန်ဖြစ်စေ SBS ၏ အဆင့်မှီသော Warehouse မှ သင့်တင့်သောနှုန်းထား ။ လစဥ်ပေးချေမှု့စနစ် ။ ထားသလောက်သာပေးရသော စနစ် များဖြင့် ၀န်ဆောင်မှု့ပေးပါသည်။
ပေးပို့သော ပစ္စည်းများ၏တည်နေရာကို အချိန်နှင့်တပြေးညီထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်သော Mobile Application များ
ကျွန်တော်တို့ SBS Delivery မှ Customer များလွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုရ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော Mobile Application များကိုပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။